Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 10:55 PM
ရည်မှန်းချက်တွေ မြင့်မြင့်မားမား ထားတတ်တဲ့အတွက်လေးစားပါတယ်..
နောင်၅နှစ်မှာ ဟေမာရဲ့ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေ တကယ်ကို အကောင်အထည်ဖြစ်လာနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော်..
အလိုရမ္မက်နည်းစွာနဲ့ စိတ်ကူးထားတဲ့ လုပ်ငန်း လေးက အတ္တနဲ့ ပရဟိတ မျှတနေလို့ ချီးကျူး ချင်ပါတယ်။
ပညာရေး ဘော်ဒါဆောင်လေး ဖွင့်နိင်သလို ချို့တဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း အခွင့်အရေး ရအောင် လုပ်ဆောင် ပေးမယ်လို့ ထင်မိတယ်။
အရာရှိသားသမီးတွေ သူဌေးသားသမီးတွေ ပညာတတ်ကြီးတွေ ဖြစ်နေချိန်မှာ လက်လုပ်လက်စား သားသမီးတွေက အများကြီး ပြတ်ကျန်နေခဲ့တာ တကယ်ကို အနာဂတ် အတွက် ရင်လေး စရာပါပဲ ။
ကွာဟချက်တွေ အများကြီး မရှိရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးစေချင်တယ်။
ကျောင်းဆရာမ ဘဝလေး ဖတ်ရတာ ကြည်နူး စရာပါပဲ ညီမလေးရေ ။
အလင်းရောင်တွေထဲမှာ ပညာအလင်းရောင် ပေးတာ အမွန်မြတ်ဆုံးပါပဲ။
ဘားအံ မှာ တာဝန်ကျပြီး ကျောင်းသူ ကျောင်းသား တွေနဲ့ ဆရာတပည့်သံယောဇဉ် လေးတွေကို ဖတ်ရတာ အရမ်းကို ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ်။
စေတနာ ၀ါသနာ အပြည့်နဲ့မို့ ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်မယ် ဆိုရင်လဲ အောင်မြင်မှာ သေချာပါတယ်။ မိဘလက်ငုပ် လုပ်ငန်းကိုတော့ တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် မိဘတွေက တသားတည်းဖြစ်အောင် သင်ပြပေးမှာမို့.. အရာအားလုံး အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့် နှင်း အဖြစ် မျက်စိထဲမှာ ကြိုတင် မြင်ယောင် မှန်းဆလို့ ရပါတယ် ဗျာ။
အစစအရာရာ အဆင်ပြေ အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း..
ညီမလေးရေးထားတာလေး တကယ်ဖတ်ရတာ အရသာရှိလိုက်တာ.. တော်တယ် ညီမလေးက.
မမလည်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ၁၀
တန်းကျုရှင်ပြခဲ့ဘူးတယ်လေ..မမကဘိုင်အိုသင်ပြီး ဦးဥာဏ်က တစ်ပတ်တခါ ရန်ကုန်ကနေလာပြီး အင်္ဂလိပ်၊သချာင်္ လာသင်ပေးဘူးတာပေါ့.. ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့
ပီတိကို မမလည်း မျှဝေခံစားပေးနိုင်ပါတယ်။
နော်..တကယ်တော့ မမလည်း တက္ကသိုလ်က ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။ဦးဥာဏ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ မခွဲနိုင်တာနဲ့ အလုပ်ခေါ်တော့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာရောက်နေခဲ့တာလေ..သွားမဖြေခဲ့ရဘူး။
ညီမလေးလုပ်ချင်တဲ့ ဘော်ဒါဆောင်အလုပ်ကလေးကို မမလည်း အားပေးပါတယ်နော်..မမတောင်မှ ၈ျပန်ကပြန်ရင် ဂျပန်စာသင်တဲ့ဆရာမလုပ်မလားလို့ တွေးနေသေးတာ.း)) စာသင်ရတာ ပျော်တယ်လေ..
ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ ညီမလေးရေ..
ဒါနဲ့ နံပါတ်မှာ ၂ ??????
စိတ်ကူးတွေ မြန်မြန် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေ။တူ တူမတွေကို လာအပ်မယ်နော်:P။
စေတနာထား ရဲရင့်ကြိုးစားတဲ့ ညီမလေးမို့ ညီမလေးလိုချင်တာ မှန်သမျှ အမြန်ဆုံးဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မနှင်းရဲ့ စေတနာနှင့်ခံယူမှုကို တကယ်လေးစားမိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့... တစ်ခါတစ်ခါမှာ စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ ကွာခြားတတ်တာကို ကြိုင်သိထားရင် စိတ်ကူးတွေ မှေးမှန်သွားတဲ့အခါ ယူကြုံးမရ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
မြန်မာလူမျိုးတွေက စိတ်ကူးနှင့်စေတနာအရမ်းထက်သန်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ အခြေအနေနှင့်အချိန်အခါအရ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အိပ်မက်ရုံဘဲ မက်ပြီး ပျောက်ပြယ်သွားကြတာ အများသားကလား။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် မနှင်းရဲ့ရွယ်ရည်ချက်တွေ ရာနှုန်းပြည့် ပြည့်ဝပါစေလို့ ကျနော် ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ညီမရေ...ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီးတော့မှ ညီမစာအရေးအသား ကောင်းမွန်ပြီး သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးတာ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာကို သဘောပေါက်တော့တယ်။
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ ညီမရဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ်...။
ညီမရဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေကိုလည်း အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
နှင်းရဲ့ နောင်၅နှစ် ဆိုတာလေး စဉ်စားထားတာ ကောင်းပါတယ်။